MapEnvelope iyo London Eye - Geofumadas
MapEnvelope iyo London Eye
Nofeembar, 2010 Google Earth / Maps, safarka
MapEnvelope waa qiiq aad u xiiso badan oo fudud oo ka mid ah wiilka oo leh dhadhan weyn oo loogu talagalay hal-abuurka.
Haddii aad waligaa rabtay inaad la yaabto adigoo sheegaayo meesha aad ku jirto qaab kale, MapEnvelope, magaca magaciisa ku yaal, wuxuu abuuraa baqshad leh khariidada daabacan.
Waxaa lagama maarmaan ah in la galo goobta, tusaale ahaan:
london indhaha, london, uk
Muuqaalka Khariidadaha Google ayaa si toos ah loogu muujinayaa goobtaas, xaqiiqada London Eye. Kadib waxaad ku dhajin kartaa fariin shakhsiyeed:
Ka luminta diyaarad London waa magdhow haddii aad raacdo London Eye.
Ugu dambeyntii barnaamijka hore ee batoonka, si aad u aragto oo daabacdo xaashida.
Kadibna, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo geeska lana qallafiyo xariiqyada dhibcaha ah sida lagu muujiyay sawirka laga qaaday webka.
Ku saabsan London Eye
London Eye ama Millennium Wheel waa jidka wayn ee wareega, oo ku yaal Web River Thames ee London. Helitaanka maaha wax dhib ah oo ka yimaada garoonka diyaaradaha ee London Heathrow kaliya waxaad bixineysaa hal maalin oo tareenka dhulka hoostiisa ah (14 pounds), u qaado terminal 5, isbeddel ka yimaada buluug illaa cirifka iyo ka tago Westminster. Safarka wareega wuxuu qaadan karaa wax ka yar laba saacadood.
Ku gal qiimaha 15 Libras, oo ay ku jiraan sawir hore oo saddex-muuqaal ah iyo sawir si aad u xasuusato haddii aad rabto inaad bixiso 10 Libras dheeraad ah.
Maqalku ma joojin, haddii dadka naafada ah ay galayaan. Inkastoo ay hoos u dhacayso, waxay siineysaa wakhti ay dadku ka soo degaan xumbada, galaan qaar ka mid ah gabdhaha leh dareemayaasha amniga iyo sidoo kale galaan dadka cusub ee 15. Tartanka oo dhan wuxuu qaadanayaa daqiiqado 35.
Qosol badan, laga yaabee kuwa kale inay ku riyaaqaan aragtida, iyo sawirada. Dhinacyadan waxaan ku raaxeysaneynaa xajmiga muraayada baaskiil wadata ee miisaanka xNUMX ee mitirka 1,700 sare.
In badan oo ka mid ah London Eye.
Isku day MapEnvelope.
Post Previous«Previous AutoCAD waxay ku noqotaa Mac
Post Next 118 Mawduucyada laga helo FOSS4G 2010Next »